सोलुखुम्बुको नेचा बेतघारी बढी नेता तर अझै अन्धकारमय «
सोलुखुम्बुको नेचा बेतघारी बढी नेता तर अझै अन्धकारमय
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:२३
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाको सबै ठाँउमा झल्मल्ल बिजुली बत्ति बलिसक्यो । तर नेचा सल्यानको बेतघारी गाँउपालीका भने अझै सम्म पनि अन्धकारमय बनेका छन् । नेचा सल्यानमा बढी नेता भएकै कारण बिकास नभएको स्थानीयको आरोप छ । धेरै बिरालो भयो भने मुसा मादैन भन्ने सत्यता चरितार्थ भएको एक स्थानीयले बताए ।
उहाले बि.स. २०५७ सालबाटै तीन करोड बाईस लाखमा बिजुली निकाल्ने तयारी गरेको बताउनु भयो । तर आर्थिक अपरदर्शीताकै कारण बीचमा ठेकदारले काम अल्पत्र पारेर रोकिएकाले हाल सम्म कुनै पनि स्थानीयले बत्ति बाल्न नपाएको जानकारी दिनुभयो । एक पछि अर्को गर्दै, एउटाले बनाउन खोज्यो अर्कोले पार्टीले अवरोध गर्न खोजे पछि यहाँ कुनै बिकासले गति नपाएको समेत उहाले बताउनु भयो । अहिले गाँउपालीकाले टेन्डर पारेर काम गरि रहेको समेत उहाले बताउनु भयो । अब चाँही कतै बत्ति बाल्न पाईन्छ की भन्ने स्थानीयले आशा गरेको समेत उहाको भनाई थियो । अर्को सोलु एफ.एमका पत्रकार डिल्ली शर्माले ग्रेड नेपाल नामक संस्थाले ठेक्का लिएर योजना अल्पत्र बनाएको बताउनु भयो ।
अनि के कारणले अल्पत्र बनाएको हो ? भनेर हामीले सोध्दा आर्थिक पारदर्शीता देखाउन नसके पछि सुरक्ष अभाव देखाउदै योजना अल्पत्र बनाएको बताउनु भयो । स्थानीय मिडिया सोलु एफ.एमले दिनको १० पटक सम्म समाचार प्रसारण गर्दा पनि कुनै सरोकारवाहरुले चासो नदिएको उहाको भनाई थियो । यत्रो लामो समयदेखि ठूलो आकारको बजेटमा सुरु गरिएको योजना अल्पत्र बनाएर बस्दा, सम्वधित निकाय र सरोकारवाला किन चुप लागेर बसेको त ? जिल्ला प्रशासन किन मौन बसेको त ? कुनै कानुनले किन आवाज उठाउन नसकेको त ? यो प्रश्न सबै आम जनचासोको बिषय बस्तु बनेको छ ।